Uyenza njani i-Automatic Google Analytics ye-UTM yokulandelela kwiSalesforce Cloud Marketing | Martech Zone
Ungayenza njani i-Automatic Google Analytics ye-UTM yokulandelela kwi-Salesforce yeLifu leNtengiso
NgoMvulo, nge-17 kaJanuwari, 2022 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 23, 2022 Douglas Karr
Ngokungagqibekanga, iSalesforce Marketing Cloud (SFMC) ayidityaniswanga ne-Google Analytics ukuze ihlonyelwe I-UTM yokulandelela imibuzo eguquguqukayo kwikhonkco ngalinye. Amaxwebhu okudityaniswa kwe-Google Analytics akholisa ukukhomba UGoogle Analytics 360 ukudityaniswa... unokufuna ukujonga oku ukuba ufuna ngokwenene ukuthatha uhlalutyo lwakho ukuya kwinqanaba elilandelayo kuba ikuvumela ukuba uqhagamshelane nokuzibandakanya kwabathengi ukusuka kwi-Analytics 360 kwiingxelo zakho zeLifu leNtengiso.
Kudityaniso olusisiseko lwePhulo loHlalutyiso lwePhulo likaGoogle, kulula ngokufanelekileyo ukufaka ngokuzenzekelayo nganye yeeparamitha zakho ze-UTM kuyo yonke ikhonkco eliphumayo kwi-imeyile yeLifu leSalesforce. Kukho izinto ezi-3:
Iiparamitha zokulandelela i-akhawunti ngokubanzi kwi-Akhawunti ye-Akhawunti.
Iiparamitha ezongezelelweyo zeNxulumaniso kuMakhi we-imeyile onokuthi ukhethe ukuyiqwalasela kwiiparamitha ze-UTM.
Amakhonkco engoma avuliwe kwi-imeyile Thumela iwizadi.
I-Google Analytics Link Tracking kwi-SFMC Business Unit Level
Ndizama ukunqanda amanyathelo ongezelelweyo ngexesha lokuthumela kuba nje ukuba wenze iphulo, akukho kubuya ngamva. Ukuthumela iphulo le-imeyile kwaye emva koko ukhumbule ukuba awukhange ube nalo umkhondo wephulo onikwe amandla yintloko, ke ndiyakhuthaza iiparamitha ze-UTM ezisisiseko ukuba zilandelelwe ngokuzenzekelayo kwinqanaba le-akhawunti ngaphakathi kwe-SFMC.
Ukwenza oku, umlawuli weakhawunti yakho uya kujonga kuCwangciso lweakhawunti yakho (ukhetho phezulu ekunene phantsi kwegama lakho lomsebenzisi):
Jonga ku Ukucwangcisa > Ulawulo > Ulawulo lwedatha > Ulawulo lweParameter
Oko kuvula iphepha lezicwangciso apho unokuqwalasela eyakho Isidibanisi sohlalutyo lwewebhu
Ngokungagqibekanga, i iiparamitha zimisiwe ngolu hlobo lulandelayo kukhangelo lwangaphakathi lwamaphulo:
Ingcebiso yam kukuhlaziya oku ku:
QAPHELA: Sibonile apho iintambo zokutshintshwa zahluka kubathengi. Unganqwenela ukuqinisekisa imitya yakho ngenkxaso Cloud Marketing. Kwaye, ewe, kuya kufuneka uthumele kuluhlu lovavanyo lokwenyani kwaye uqinisekise ukuba iikhowudi ze-UTM zihlonyelwe.
Oku kongeza oku kulandelayo:
umkhankaso we-utm_ isethelwe SFMC
utm_phakathi isethelwe Imeyli
utm_umthombo imiselwe ngokutshintshayo kweyakho Uluhlu lwegama
utm_omxholo imiselwe ngokutshintshayo kweyakho Igama le-imeyile
utm_term is ngokhetho seta usebenzisa uphawu lwe-imeyile eyongezelelweyo evela kumakhi wakho we-imeyile
Gcina useto lwakho kwaye iparameter iya kudityaniswa kuloo akhawunti.
Ukuhlaziya uphawu lwakho lwe-imeyile olongezelelweyo
Ndiyifihlile idatha yenqanaba le-akhawunti kulo mfanekiso wekhusi, kodwa uyabona ukuba ngoku ndingayiguqula eyongezelelweyo iparameter yophawu lwe-imeyile ukuseta utm_term ukhetho. Ndingafuna ukusebenzisa oku kuhlelo olusisiseko lwe-imeyile yam njenge-upsell, i-cross-sell, ukugcinwa, iindaba, indlela yokwenza, njl.
Track Links Xa Thumela kwi SFMC
Ngokuzenzekela, Ukucofa umkhondo yenziwe xa ithunyelwa kwi SFMC kwaye ndingacebisa ukuba ungaze ucime olo khetho. Ukuba uyayenza, ayisusi nje umkhondo wakho we-UTM, isusa lonke ukhangelo lwangaphakathi lwephulo lokuthumela ngaphakathi kwiLifu leNtengiso.
Nantso ke… ukusukela ngoku ukuya phambili nanini na i-imeyile zithunyelwa ngaloo akhawunti, ngokufanelekileyo Uhlahlelo lukaGoogle lombuzo wokulandela umkhondo we-UTM ihlonyelwe ukuze ukwazi ukubona iziphumo zentengiso yakho ye-imeyile ngaphakathi kweakhawunti yakho ye-Google Analytics.
Uncedo lweLifu leSalesforce: Lawula iiParamitha
Ukuba inkampani yakho idinga ukuphunyezwa okanye uncedo lokudibanisa kunye neSalesforce Marketing Cloud (okanye ezinye iinkonzo ezinxulumene neSalesforce), nceda ucele uncedo nge Highbridge. Zivezile: Ndingumlingane ku Highbridge.
tags: __I-AdditionalEmailAttribute1EmailName_i-google analyticskwenziwa kanjaniLinkNameListNameulawulo lwepharamithailifu lentengiso ye-saleforcesfmcamakhonkco umkhondoiiparameter ze-utmumkhankaso we-utm_utm_omxholoutm_phakathiutm_umthomboutm_termisinxibelelanisi sohlalutyo lwewebhu
I-SlayerAI: Ukumisela amagama amaninzi ahlukeneyo ekufuneka uphumelele